Ao anatin’ny ady amin'ny fipariahan'ny COVID-19 dia fokontany 10 ao amin'ny Kaominin'Antananarivo Renivohitra no nahazo fanampiana fanampiny amin'ny resaka fahadiovana sy fidiovana. Natolotra ny CUA tamin'ny 5 May ny fitaovana fanangonana ireo fako isan-tokantrano, kojakojam-pidiovana ary fitaovana fanasana tanana. Izy io dia vokatry ny fiaraha-miasa eo amin'ny Minisiteran'ny Rano, ny Fanadiovana ary ny Fidiovana, ny tanànan'Antananarivo Renivohitra, ny UNICEF, ny governemanta Norvezianina ary ny governemanta ao Danmarka, amin'ny alàlan'ny DANIDA (Birao Danoà ho an’ny fampandrosoana iraisam-pirenena).
ANTANANARIVO, 05 Mey 2021 - Ny tanànan'Antananarivo dia mijanona ho ivon'ny valan’aretina COVID-19 eto Madagasikara. Miha-mafy ny ady, indrindra eo amin'ny sehatry ny fahadiovana sy fidiovana. Natolotra ny Kaominin'Antananarivo Renivohitra ny fitaovana sy kojakoja fidiovana ny 5 Mey lasa teo, tao anatin'ny tetik'asa ifotony vonjy maika sy fampandrosoana WASH, ho tombontsoan'ny mponina ao amin'ireo fokontany 10 tena tratran’ny COVID-19. Ity fanohanana ity dia mikendry ny hanatsarana ny fanadiovana eny anivon’ny fokontany marefo tsirairay, ary koa ny fidiovan'ny isan-tokantrano sy ny mponina mandalo amin'ny toerana fampiasan’ny daholobe, mba hisoroana ny fipariahan'ny COVID-19.
Ny fanomezana dia ahitana kit misy fitaovana fanangonana fako isan-tokantrano ary hatolotry ny CUA amin'ireo fikambanana misahana ireo asa ireo; ao anatin'izany ny laborety, sarety, dabam-pako mpanelanelana, fitaovam-panangonana fako, akanjo natokana ho an’ny fandraofana fako ary aro-vava.
Ho fanampin'izany, ny fidiovana dia tokony hihatsara eny anivon’ny tokantrano 4.000, izany hoe olona manodidina ny 20.000, nohon’ny fanomezana kit ahitana siny 15 litatra miisa 8000, siny 20 litatra miisa 4 000 ho an’ny fanasana tanana, ary baoritra savony 2.666. Ary farany, fitaovana fanasana tanana 70 izay mahazaka 500 litatra no hapetraka eny amin’ny toerana fampiasan’ny daholobe.
« Ny fiaraha-miasa mirindra eo amin'ny mpiara-miombon'antoka sy ireo mpisehatra eo amin'ny sehatry ny rano, ny fanadiovana ary ny fidiovana dia tena ilaina tokoa amin'ny ady atao amin'ny COVID-19. Ity tetik'asa ifotony vonjy maika sy fampandrosoana eo amin'ny sehatry ny rano, fahadiovana ary fidiovana ity izay natao ho an'ny mponina tratran’ny COVID-19, dia mahakasika ireo Kaominina Antananarivo Renivohitra sy Toamasina. Ny fanamafisana ny hetsika natao teny amin'ny faritra rehetra teo amin’ny lafin’ny fahadiovana sy ny fidiovana dia tafiditra tanteraka ao anatin’ny andraikitry ny MEAH; nohamafisina izany entina miady amin'ny COVID-19 tao anatin’ny fiaraha-miasa amin'ireo andrim-panjakana sy ny orinasam-panjakana ary ireo tsy miankina hafa », hoy ny sekretera jeneralin'ny Minisiteran'ny Rano, Fahadiovana ary ny Fidiovana, Simon Randriatsiferana.
« Ny masoivoho Norveziana dia miahiahy mafy ny amin'ny fahasahiranana atrehan'ny vahoaka Malagasy manoloana ny andiany faharoa amin'ny valan’aretina. Manantena izahay fa ity fanampiana ity dia hanatsara ny fidiovan'ny tokantrano sy ny fahadiovan’ireo fokontany lasibatra, » hoy ny Minisitra - Mpanolotsaina ao amin'ny Masoivoho Norveziana, Andriamatoa Andreas Danevad. Tsara ny manamarika fa i Norvezy dia nanolotra 10 tapitrisa NOK ho fiatrehana ny valan’aretina eto amin’ny firenena eo amin'ny sehatry ny rano, fanadiovana sy ny fidiovana.
« Tsapa tamin’ny lesona azo avy amin’ny andiany voalohan’ilay valan’aretina fa ny ady amin'ny Coronavirus dia mitaky ihany koa ny fanamafisana ny fahaiza-manaon'ny tanàna, ny fokontany ary ny sampan-draharaha mifandraika amin'izy ireo, mba hiantohana ny fanangonana, ny fanariana ary ny fikarakarana ireo fako. Ny fihenan'ny vidin'ny rano eny amin'ny paompy sy ny fampiroboroboana ny fomba fanasan-tànana, na eny anivon’ny tokantrano izany na eny amin'ny toerana ampiasain’ny daholobe, dia fitaovana manan-danja hanakanana ny fipariahan'ny COVID-19. Ny UNICEF dia hanohy ny fanaovana adisisika eny amin'ireo mpamatsy vola mba hanohanana ny fitohizana sy ny fanapariahana ireo sahan’asa toy ny “Avotr'aina”, ny fanolorana fitaovana fanasan-tanana misy rano sy savony ho an’ireo tokantrano sy ireo toerana ho an'ny besinimaro, » hoy ny lefitry ny solontenan'ny UNICEF eto Madagasikara teo am-pamaranana.
Lahatenin'ny Lefitry ny Mpisolotena Maharitry ny UNICEF eto Madagasikara
Fametrahana fitaovana fanasana tànana eny ankalamanjana
Rakitra haino aman-jery
Vakio ihany koa ny fanambarana an-gazety nozaraina tamin'ny volana Janoary raha mila fanazavana fanampiny: